Tutorial amin'ny jailbreak iOS 10 miaraka amin'i Yalu sy Cydia Impactor | Vaovao IPhone
Pablo Aparicio | | Jailbreak, Fampianarana sy torolàlana
Araka ny efa nitaterantsika fotoana vitsy lasa izay, dia tsy nanao izay tsara indrindra vitany intsony i Luca Todesco, izany hoe nitafy nify lava, ary nandefa ny kinova Yalu voalohany, fitaovana iray hanaovana jailbreak mankany amin'ny iOS 10.1.x izay ao amin'ny beta amin'izao fotoana izao. Toy ny fitaovana Pangu farany indrindra, dia a jailbreak semi-tethered ary mila Cydia Impactor hametraka ny IPA avy amin'ny toerana izay hampiasantsika azy isaky ny mamerina ny fitaovana iOS isika.
Na dia ny hacker aza no niandraikitra fampitandremana fa efa ao anaty dingana beta ilay rindrambaiko ary tsy tokony apetratsika izany raha tsy hoe tsy fantatray izay ataonay, amin'ity lesona ity dia hanome anao ny dingana harahinao hametrahana ity jailbreak farany ity, antsoina hoe Yalu, mampiasa ny fitaovan'ny Saurik Cydia Impactor.
1 Zavatra tokony ho ao an-tsaina sy ny dingana teo aloha
2 Yalu Jailbreak fametrahana dingana ho an'ny iOS 10.1.x
Zavatra tokony ho ao an-tsaina sy ny dingana teo aloha
Toy ny mahazatra dia hanao fanovana amin'ny firmware misy ny fitaovana isika, alohan'ny hanombohantsika. izahay dia hamerina handrakitra ny angon-drakitra manan-danja rehetra avy amin'ny fitaovana iOS. Azontsika atao izany amin'ny iTunes / iCloud, izay mety ho nomaniny ho solon'izay feno, na amin'ny alàlan'ny fitahirizana ireo rakitra izay tadiavinay ihany, toy ny sary, horonan-tsary ary karazana antontan-taratasy hafa ihany.
Mba hanatanterahana ny fizotrany, alohan'ny hanombohana tsy maintsy hofoananay ny kaody hidy ary «Tadiavo ny iPhone» (Misaotra, Miguel!).
Tamin'ny fotoana nanoratanao an'ity fampianarana ity, ity jailbreak ity Tsy miasa afa-tsy amin'ny iPhone 7 izay manana iOS 10.1.x napetraka ary iPhone 6s sy iPad Pro amin'ny kinova iOS 10 rehetra. Ny iPod sy ireo fitaovana tranainy hafa dia hiasa amin'ny kinova ho avy, na dia mety tsy hampiditra fanohanana an'ireo fitaovana 32-bit aza (hoy izy ireo).
Ny jailbreak dia semi-tethered ary hijanona tsy hiasa isaky ny mamono na mamerina mamerina ilay fitaovana isika.
Hamafisina- Satria ny rafitra dia mitaky Cydia Impactor, ny jailbreak dia mety hijanona tsy hiasa ao anatin'ny 7 andro raha voamarina fa miankina amin'ny mari-pankasitrahana an'ny mpamorona. Azo inoana fa hanampy ny Todesco ny rafi-pitenenana amin'ny Internet, izay hamaha ity olana ity.
Ny zava-dehibe indrindra: tadidio izany ny rindrambaiko dia ao anatin'ny dingana beta ary ny developer dia tsy manoro hevitra ny fampiasana azy raha tsy fantatrao tsara izay ataonao.
Yalu Jailbreak fametrahana dingana ho an'ny iOS 10.1.x
Izahay dia nisintona ny kinova Yalu farany teo Ity rohy ity ary Cydia Impactor avy amin'ny eto.
Manokatra ny fisie izahay Impactor_0.9.3.dmg izay alaina amin'ny dingana teo aloha.
Izahay dia misintona an'i Impactor mankany amin'ny fampirimana fampiharana. Mety hiasa izy io amin'ny fihazakazahana azy amin'ny DMG, saingy tsy mendrika ny hanaovana risika izany raha jerena ny toetran'ny fitaovana Todesco ankehitriny.
Manokatra ny folder Applications izahay ary tsindrio indroa amin'ny Impactor hampandeha azy. Hilaza amintsika izy io fa rindranasa alaina amin'ny Internet izy io ary mety hampidi-doza, nefa ekentsika.
Mampifandray ny iPhone 7, 6s na iPad Pro amin'ny solosaina amin'ny tariby Lightning-USB izahay. Raha manontany anay ianao raha matoky ny solosaina izahay dia miteny hoe eny.
Notaritarinay ny fisie IPA Yalu - izay tamin'ny fotoana nanoratana ity tutorial ity dia nantsoina mach_portal + yalu-b3.ipa- izay nakarinay tamin'ny dingana 2 mankany amin'ny varavarankely Cydia Impactor.
Avy eo dia hangataka ID Apple ho antsika izy. Napetrakay izy io.
Mametraka ny teny miafinay izahay ary manaiky.
Ankehitriny dia tsindrio ny Start hanombohana ny fizotran'ny fametrahana.
Raha vao apetraka dia avelantsika ny solosaina ary mankany amin'ny iPhone na iPad Pro. Midira isika Fikirana / General / Profiles ary fitantanana fitaovana.
Misafidy ny Apple ID izahay, na ilay nampiasainay tamin'ny dingana 7.
Mikasika ny «Matokia + ny_email anay» izahay.
Manaraka izany, mikasika ny Trust indray izahay.
Miverina amin'ny efijery an-trano izahay ary manao "mach_portal". Hahita efijery banga tsy mihoatra ny 30 segondra isika.
Miandry ny famerenantsika ny iPhone na iPad Pro isika izao ary hahazo izany. Isaky ny manomboka indray isika dia tsy maintsy mihazakazaka mach_portal (yalu).
Todesco dia namoaka fitaovana iray ahafahantsika mamerina manamboatra ny jailbreak Pangu farany avy amin'ny pejin-tranonkala iray, izay nahatonga azy tsy hiankina amin'ny mari-pankasitrahan'ny developer Ny anarana hoe "mach_portal" dia mahatonga ahy hieritreritra fa ny hacker malaza dia mieritreritra zavatra mitovy amin'ny jailbreak azy manokana, izay midika fa hiasa foana izany raha averintsika avy amin'ny Internet ilay izy. Tsaroantsika izany Ny jailbreak farany nataon'i Pangu dia miankina amin'ny mari-pankasitrahan'ny mpandraharaha izay averin'i Apple matetika. Raha manafo ny taratasy fanamarinana i Apple dia mijanona tsy mandeha ilay rindranasa, noho izany dia mila maka iray hafa isika hanao ilay dingana indray, zavatra izay tsy azo atao foana.
Na dia efa nampitandrina aza i Todesco fa tsara kokoa ny tsy hanaraka an'ity fampianarana ity raha tsy fantatsika izay ataontsika, aza misalasala mamela ny zavatra niainanao amin'ny fanehoan-kevitra raha manapa-kevitra ny tsy hiraharaha azy ianao ary manaparitaka ny fitaovanao iOS amin'ny iOS 10.1.x avy eo mametraka Cydia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Fampianarana handrindrana ny iOS 10 miaraka amin'i Yalu sy Cydia Impactor
Leonardo Alexander dia hoy izy:
Salama maraina avy any Mexico, takatra ny inona ny iPhone 6s amin'ny endriny rehetra, ao anatin'izany ny iOS 10.2.1?
Misaotra, toy ny pejy tsara foana.
Valiny tamin'i Leonardo Alejandro
Salama Leonardo. Raha ny filazan'i Todesco, ny faharefoana nampiasainy dia mihidy amin'ny iPhone 7, saingy ho sarotra kokoa ny manidy azy amin'ny iPhone 6s sy ny teo aloha. Midika izany fa raha tsy amboarin'i Apple amin'ny ho avy io dia hiasa amin'ny iOS 10.2.x sy ny kinova iOS 10 ho avy mandra-pandamin'izy ireo ny ampiasainao.
ArthurNoLimit dia hoy izy:
Pablo ao amin'ny lahatsoratra feno dia apetrahinao foana ny 10.1.x, izay midika fa misy iPhone 7/7 + sy 6S misy kinova 10.1. (Avy amin'ny 1 ka hatramin'ny 10) dia tokony ho afaka hampiasa ilay fampianarana mba hanaovana ilay Jailbreak. Azafady mba hamafiso raha diso aho.
Mamaly an'i ArthurNoLimit
Salama. Midika izany X fa tsy isa fotsiny. Amin'izao fotoana izao, ity jailbreak ity dia mifanaraka amin'ny iOS 10.1.0 sy iOS 10.1.1, izany no mahatonga ny X. Ary tsy mazava 100% ihany koa ny nanoratany ny "iOS 10. (1 (.1))" izay anaovany tsy vita hahalala raha karazana fahasoavana na zavatra hafa. Ireo mpijirika hafa dia hanoratra zavatra toa ny "iOS 10-10.1.1" na "iOS 10-10.2.x" mba hahafantarantsika hoe iza no kinova voalohany iasany ary iza no farany. Raha ny zavatra azoko, izay navotsotra androany dia mifanentana amin'ny iOS 10.0 ka hatramin'ny iOS 10.1.1, fa ho an'ny iPhone 6s sy ny teo aloha dia mety ihany koa amin'ny kinova ho avy koa.
Azoko amin'ny alàlan'ny "10. (1 (.1))" fa mifanaraka amin'ny iOS 10 izy roa, toa ny 10.1 sy 10.1.1. Izany hoe, na inona na inona kinova avy amin'ny iOS 10 ka hatramin'ny iOS 10.1.1 (raisina ho 10.2 ny kinova manaraka).
Ka izay no mety amin'ny kinovako amin'ny iphone 7 plus 10.0.3? Azafady mba hamafiso aho satria mieritreritra ny hanana jailbreak aho, tsy niaraka tamin'ny iPhone vaovao nataoko nandritra ny 2 ora ary efa te-jalbreak aho, tsy haiko ny miaina tsy misy an'io!
Tsy maintsy esorinao ny kaody mamoha ary hahitako ny iPhone, raha tsy tsy afaka atao ny jailbreak. (INPUT)
Misaotra! Nampidirina tamin'ny dingana teo aloha.
Manantena aho fa hahazo an'io ho an'ny iPhone 6 ihany koa aho, saingy inona no mampiditra ilay 10.1.1 ... na izany aza!
Luis Leyva dia hoy izy:
Tsy niasa tamiko io tamin'ny iPhone 6s tamin'ny iOS 10.1.1
Rehefa miditra amin'ny app "mach_portal" aho dia miseho ny efijery fotsy ary milaza ny angano iray fa efa akaiky ny fitehirizako (saika maimaimpoana ny 3Gb). Ary avy eo tsy manao zavatra hafa izy.
Valiny tamin'i Luis Leyva
Quique dia hoy izy:
rehefa mametraka ny jb avy amin'ny cydia impactor dia manome ahy lesoka FANAMPIANA !!
Valiny amin'i Quique
Lapene dia hoy izy:
Tsy afaka mametraka zavatra tsy hain'ny Cydia impactor ny tenimiafiko ... lasa lesoka izy io. ary niditra tao amin'ny wed icloud aho mba hanamarinana raha marina ny teny miafiko ary tsy nanana olana aho, afaka manampy ahy azafady ny olona sasany?
Valiny tamin'i Lapeno
Pablo Fuentes dia hoy izy:
Nanao an'io ianao ?? Mandeha any AppleID izahay, miditra miaraka amin'ny kaontinay ary manindry ny safidy "Mamorona tenimiafina" ao amin'ny faritra "Mamorona tenimiafin'ny fampiharana".
Valiny tamin'i Pablo Fuentes
Tsy ny lakilen'ny ID-nao fa ny noforoninao
Stvn Fuenmayor dia hoy izy:
Marefo haingana ny fanamarinana roa sosona avy ao amin'ny pejy iTunes, apetraho ao amin'ny google ny lohatenin'ny olana ary tadiavo izay hazavainy.
Valiny tamin'i Stvn Fuenmayor
Salama, manana iphone 6s 64gb aho, mametraka match_portal amin'ny alàlan'ny Cydia Impactor. Rehefa manomboka ny vavahady lalao dia mikatona eo noho eo ary tsy misy na inona na inona, indraindray dia maharitra 5 na 10 segondra ny fanidiana azy, eny fa na ny iphone-ko aza efa niverina indray mandeha nefa tsy nipoitra i Cydia. Misy fomba hampandehanana azy io?
Toy izany koa no mitranga amiko amin'ny iPhone SE, vitanao ve ny manao izany?
Namaky ny Twitter an'i Luca Todesco aho ary imbetsaka dia averiny fa ny beta manaraka dia ho avy miaraka amin'iny bibikely iny. Toa azoko ihany koa ny nahatakatra fa nandefa patch ianao mba hampandeha azy, saingy tsy nahazo fampahalalana bebe kokoa momba izany aho.
Nisafidy ny hiandry vaovao vaovao aho, na avy amin'ity pejy ity na avy amin'i Luca Todesco, momba ny famoahana ny kinova match_portal manaraka.
Na ahoana na ahoana, ny iPhone SE dia tsy miseho ho fitaovana mifanaraka amin'izao fotoana izao ...
Mety ho an'ny Windows izany
Roosh dia hoy izy:
Nahazo ny lesoka tamin'ny tenimiafin'ny mpampiasa ihany koa aho ... mila miditra amin'ny tranonkala miaraka amin'ny mpampiasa anay ianao ary mangataka kaody ho an'ny rindranasa, mandeha ho azy io. Ity kaody ity no iray izay tsy maintsy apetraka ao amin'ilay mpiorina miaraka amin'ilay mpampiasa antsika ihany. Manantena aho fa nanazava ny ahiahinao. Miarahaba !!!
Mamaly an'i Roosh
Ireo izay tsy hianatra amin'ny fiainana dia hoy izy:
Izao ve ianao manomboka mahatakatra ny "aza mametraka ..."?
Ohatrinona ny miandry ny kinova famoahana?
Mamaly an'i LosHayQueNoLearnInLife
Carlos Hidalgo Jaquez dia hoy izy:
azo atao amin'ny windows io sa mac ihany ?????
Valiny tamin'i Carlos Hidalgo Jaquez
iPhone 7 plus, iOS 10.1.1 jailbreak vita, substrate napetraka, fa amin'izao fotoana izao dia saika tsy misy tweaks tohana.
Azoko atao ve izany amin'ny 10.0.1? Novidiko androany ny 7 plus ary io no napetraka ary nijanona tsy nanao sonia ny hafa i Apple, tsy haiko na hanandrana na hisy hilaza amiko raha efa nahavita izany tamin'ny 10.0.1
Fantatrao ve raha misy ny vahaolana amin'ny 4G izay nijanona tsy niasa taorian'ny fivorian'ny fonja? Misaotra anao
Lis4rd0 dia hoy izy:
Ho an'ireo izay mahazo lesoka 150 Cydia Impactor no tokony haleha https://appleid.apple.com midira amin'ny anaranao sy ny tenimiafinao, ary mankany amin'ny faritra Security - Manova - Password miafina - Mamorona teny miafina. Ny teny miafina izay mamorona azy ireo dia tsy maintsy mandika ary apetaho eo amin'ny varavarankely misy ny cydia impactor rehefa mangataka ny teny miafiny.
Valiny amin'i Lis4rd0
Zavatra tsy hitako tao amin'ilay lesona .. tsy maintsy efa napetraka madio ny kinova iOS 10.1.x, na raha manavao amin'ny alàlan'ny OTA avy amin'ny kinova taloha isika, azo atao ve izany?
Salu2 avy amin'i Nic.
Valio i wisslimp
Salama, namela ny olako voasoratra etsy ambony aho, ny tena zava-mitranga amiko dia ny fianjeran'ny match_portal ary tsy manao na inona na inona. Novakiako fa tsy maintsy miandry ny beta manaraka isika ... Mihevitra ve ianao fa mety hisy vahaolana hafa?
Misaotra betsaka mialoha. Miarahaba.
Pokémon miaraka amina jailbreak dia miasa ho anao, manomboka izany fa tsy mampiseho na inona na inona
julio0250 dia hoy izy:
iPhone SE miaraka amin'ny IOS 10.0.0 dia tsy niasa ho ahy, havaozina ho 10.2 (satria nijanona tsy nanao sonia 10.1 izy ireo ary taty aoriana dia hitako ny momba ny prometheus afaka mametraka azy io tsy misy sonia) ary tsy nety tamiko koa, mila miandry isika mba havoaka ho an'ny IOS 10.2 izao.
Mamaly an'i julio0250
Tsy afaka nanao ny jailbrake tamin'ny windows 10 aho, nisintona an'ity kinova farany ity ary mbola miteny ihany hoe feno ny fitehirizana. Raha misy afaka manampy ahy dia tena tiako ilay izy !!
Manome ahy lesoka izy io rehefa mamaky ny angon-drakitra, ary izao rehefa mamerina ny telefaona dia mitandrina hatrany aho, manampy?
kay crockery dia hoy izy:
maninona no tsy mandeha amin'ny iOS 10.0. Manana iphone 6s iOs 10.0 aho saingy hita ao amin'ny error error 42 ilay izy ary milaza amiko fa mila kinova 10.1 aho nefa toa efa nijanona tsy nanao sonia azy intsony izy ireo, misy sosokevitra ve?
Mamaly kay loza
Davis dia hoy izy:
Miarahaba anao! Te hahafantatra aho raha afaka jailbreak ny iphone 7 amin'ny IOS 10.0.2 Misaotra
Valiny tamin'i Davis
Cristian Rios dia hoy izy:
Misy mahalala hoe mandra-pahoviana ny fizotry ny fametrahana ny jailbreak manomboka amin'ny fotoana manjombona ny efijery?
Valiny tamin'i Cristian Ríos
MYSTERY KING1019 dia hoy izy:
tsy fantany ny ipad-ko
Valio amin'i REYMISTERIO1019
Tsy mametraka ahy miraharaha izany, ny dingana rehetra vita, mivoaka avy ao amin'ny iCloud aho ary nesorina ny kaody ary tsy misy na inona na inona ny fizotrany nefa tsy mametraka ahy izy io, hikarakara vahaolana? fiarahabana
Rehefa manao ny Jailbreak ho tsara daholo ny zava-drehetra fa tsy misokatra i Cydia ... Miezaka ny manokatra ny app aho dia mikatona indray! Avy eo dia milaza fa efa vita ny Jailbreak. Inona no azoko andrasana? IPhone 6 ios 10.0.2.
Fanavaozana firmware vaovao ho an'ny Apple AirPorts